Qaamuus Caafimaad - First Somali /English Medical Dictionary.
Author Topic: Qaamuus Caafimaad - First Somali /English Medical Dictionary. (Read 69682 times)
« on: April 22, 2011, 10:17:02 PM »
Waxaan maanta xubnaheenna sharafta leh la socodsiinaynaa meel walba ay joogaan in uu hirgalay heliddii qaamuus caafimaad oo af-soomaali iyo english ah.
Qaamuuskaan caafimaad waa kii ugu horeeyey noociisa ah. Ma jiro mid la mid ah. Waa qaamuus si wanaagsan looga soo shaqeeyey aadna u anfaca isticmaalka guriga, ardayda barata maadada caafimaadka, ama kuwa barta kalkaaliyenimada, dadka la shaqeeya waaxaha caafimaad iyo xiriirka u dhaxeeya takhtarka iyo bukaanka.
Wuxuu ka koobanyahay in ka badan 5000 oo erey, oo isugu jira cudurada, daawooyinka, cilada hiddo wadeyaalka firkooda iyo sida loo daaweeyo. Waxaa kale oo sii dheer qaliinka iyo sida loola xaajoodo takhtarka nooc walba uu yahay.
Qaamuuskaan oo qoristuusu qaadatay muddo dhan 3 sano ayaa waxuu soo gabagaboobay bishii January ee bilawga sanadkaan 2011.
Qaamuuskaan waxaa qoray Dr. Liibaan Ali Diriye oo ah takhtar ku taqasusay cilmiga dhiigga "Heamtology" ahna qoraa xiiseeya qoraallada caafimaadka kuna nool dalka ingiriiska.
Ardayda caafimaadka ka barato dalka gudihiisa waxaan ugu bishaaraynaynaa in qaamuuskaan ay ku heli doonaan si bilaash ah iyadoo qoraaga ku talo jiro inuu soo booqdo bilaha soo socdo jaamacadaha caafimaadka ee ka jira dalka.
Qaamuuskaan warbixintiisa waxaad ka heli kartaan webka (www.pharmedic.org.uk)
Re: Qaamuus Caafimaad - First Somali /English Medical Dictionary.
« Reply #1 on: April 22, 2011, 11:15:25 PM »
Waxaanu Codsanin Haddii la heli karro ama Macquul noqoto in qaybta Buubaagta lagu darro, si aanu uga faa'iidaysanno.
Waxaa jirta arday badan oo aan si toosa u helli karrin iyaddoo ay ugu wacan tahay meelaha ay dunnidda
ka joogaan oo laga yaabo in aan buugan laga heli karin meelaha suuqyadda ah.
« Reply #2 on: April 22, 2011, 11:26:34 PM »
Anagoo dareensan baahida loo qabo qaamuus caafimaad, ardayda oo idline aysan wada heli karin ayaan waxaan wadnaa qorsho qaamuus caafimaad oo u gaar ah webka, kaasoo qof waliba uu ka baaran karo erayada uu rabo webka gudihiisa.
Waxaan rajaynaynaa in dhowaan aan hergalinno "SomaliDoc Online Dictionary".
Waana idin la socodsiin doonnaa wixii ka soo cusboonaada.
« Reply #3 on: April 24, 2011, 09:03:54 PM »
Waad mahadsantihiin sida wacan ee aad ugu dadaalaysiin dhalinta soomaaliyeed iyo dhalinyarada\_ ardayda wax barato.. waana idinkaga fadhinaa intaan iyo inkabadan insha allaah, allahana idinka abaal mariyo, dhamaan intii kaqaybqaataday soo saaristaa waxii waxtar uleh umada somaaliyeed..
« Reply #4 on: April 24, 2011, 10:06:04 PM »
People actually need this , esp students and health-care workers..\_
« Reply #5 on: April 25, 2011, 05:24:50 PM »
Masha'llah waa mashruuc aad qiimo iyo waxtar leh.
Way ku mahadsanyihiin dadka juhdiga ku bixiyay qoridda buugaan.
« Reply #6 on: April 26, 2011, 10:04:37 AM »
A/C Xageen kaheli karaa qaamuuskaan?
« Reply #7 on: April 26, 2011, 06:28:38 PM »
Quote from: Mohamud Farah on April 26, 2011, 10:04:37 AM
« Reply #8 on: April 27, 2011, 02:03:29 PM »
Salaam Caleykum WW,
walaal yal booggan wa boog aad iyo aad uu fiicaan. waxaan isticmalla asigoo english ah oo ah dabcaadi OXFORD clinically boogan boog la miid ah oo medical dictionarry ah ma jiro,marka hadana waa hor mar aad iyo aad uu weyn in an helno asigo luuqadeni ah oo noo fuduud fahamkiisa, madama ay noogo adagtahay kelmadaha qaar oo greek ah iyo macnaheeda oo ah english oo anaga uu dhan. walaaladeen sida Dr Mahdi walaal waxan ka cood saneyna in aan noo shegtiid meesha laga iibsan karo waa uu na anfaca hadi aano nahay somalida wax ka barada dhan cafimaadka. waan jeclan laha in saas oo kale loo turjuumo all bogagta clinical Medicineka ah iyo pathologiga iyo physiologiga oo ay uu bahan yahiin ardaydeena in aay fahmaan qasatan kuwa joogo wadanka oo ku adag englishka. ma adiinku dhereynaayo wadna ku mahad san tahiin.Hussein Haji
« Reply #9 on: April 28, 2011, 09:21:56 PM »
Quote from: Mutaweli on April 27, 2011, 02:03:29 PM
Walaal Mutawell, waxaad qaamuuskaan ku heli kartaa adigoo la xiriira qoraaga.
waxaadna kala xiriri kartaa webkaan: (www.pharmedic.org.uk)
Markaa webka gashid waxaad ka sii doorataa qeybta: Contact Us.
« Reply #10 on: May 05, 2011, 10:46:45 PM »
wadku mahad san tahay walaal wan la xariiri doona inshallah.
« Reply #11 on: May 08, 2011, 07:40:28 PM »
aad baan idin salaamay waxaan jeclaan lahayn in aad baaadhisaan helitaankiisa
haddi aanu nahay ardayda ku nool dalka somalia
« Reply #12 on: August 08, 2011, 02:32:46 AM »
Tani caadi ma ahan! waa soo dhaweynayaa qaamuskaan, zaa'id ayaan ugu baahanaa maadaama erayad caafimaadka qaarkood aadan layman's aadan ugu fasiri karin waalidka.
« Reply #13 on: September 11, 2011, 10:26:03 PM »
waan idin salaamay; walaal waxaan doonayaa inaad ii sheegtaan sidii aan ku heli karo qaamuus caafimaad aniga oo joogaa Jigjiga Ethiopian
« Reply #14 on: September 12, 2011, 09:19:57 PM »
Walaal Abdi, Qaamuuska waxaad ka heli kartaa, sida uu Dr Mahdi kor ugu xusay websiteka www.pharmedic.org.uk adigoo riixaya halka ku qoran contact us.
Views: 26734 February 12, 2011, 08:31:41 PM
"I would like to this to be Sticky" aka.. Medical school info.
Started by DANGOBoard I want to Study Medicine
Views: 16286 November 08, 2008, 07:05:19 AM
Views: 25901 September 20, 2011, 08:59:33 AM
"VACANCY" Medical Doctor Based in Jowhar Somalia (100%)
Started by DrkheyreBoard Medical Jobs & Trainings
Views: 26476 December 02, 2011, 06:13:19 PM
(VACANCY) Medical Doctor, Nurse, Assistant Nurse, Feeding Assist - MSF Holland
Views: 18074 June 29, 2011, 04:43:11 PM